3562 Fehezam-boninkazo Strawberry
Ny fehezam-boninkazo vaovao miditra ao amin'ny salon-nao, avy hatrany ianao dia miroboka ao amin'ny tontolon'ny hatsarana sy ny fofon'ny voninkazo vao voapaika. ho an'ny mpitsidika tsirairay, ny voninkazo ho an'ny fehezam-boninkazo na ny firafitra dia voafantina tsirairay. fehezam-boninkazo avy amin'ny firindrana dia manana hanitra tsy mampino foana, miavaka izy ireo! fehezam-boninkazo, nadika avy amin'ny teny frantsay, dia "fehezam-boninkazo mifatotra kofehy." firindrana voninkazo - Ny fivarotanay dia nametraka ny fanahin'izy ireo hamorona firaketana na fehezam-boninkazo. miloko mitana andraikitra lehibe amin'ny famoronana fehezam-boninkazo mirindra.
3899 Fehezam-boninkazo matsiro
Hazo paoma - 7 pcs.
Bush nitsangana - 5 pc.
Miditra amin'ny salon misy anao, dia hidina avy hatrany ao amin'ny haben'ny hatsaran-tarehy sy ny hanitra avy amin'ny voninkazo vao tapaka ianao. Ny voninkazo ho an'ny fehezam-boninkazo na firafitra dia voafantina tsirairay isaky ny mpitsidika. Ny fehezam-boninkazo avy amin'ny Harmony dia manana hanitra tsy mampino foana, miavaka izy ireo! Ny fehezam-boninkazo, nadika avy amin'ny teny frantsay, dia "fehezam-boninkazo mifatotra kofehy." Florists Harmony: nametraka ny fanahin'izy ireo tamin'ny famoronana firaketana na fehezam-boninkazo ny salon anay. Ny loko dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famoronana fehezam-boninkazo mirindra. Ny fehezam-boninkazo dia sary miovaova amin'ny voninkazo na voninkazo maro mitovy karazana.
4456 Fehezam-boninkazo mahafinaritra
Ny famoronana dia mety ho vita araka ny fanirianao. Ireo mpivarotra voninkazo za-draharaha dia afaka mandamina fehezam-boninkazo tokana, voninkazo voafantina matihanina, singa haingon-trano, kofehy fanomezana ary fonosana izay mameno tsara ny firafitra ankapobeny. azonao atao ny manisy vatomamy, karatra ary kilalao voaroba mba hanampy tsiro.
3999 Fehezam-boninkazo laharana 328
Ny fehezam-boninkazo ataonay dia mahatonga ny fialantsasatra tsy hay hadinoina, mamiratra sy maro loko kokoa. tena misy sy velona tanteraka izy ireo, na dia toa zavaboary mahafinaritra aza. Ny mpanjakavavin'ny voninkazo toy izany dia tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha, satria tsy mahazatra ny mandray raozy miaraka amin'ny loko tsy mahazatra ho toy ny fanomezana. fehezam-boninkazo amin'izy ireo dia hifanaraka amin'ny fialantsasatra mahafinaritra, fankalazana ny fampakaram-bady, na hampifaly ny olon-tiana tsotra izao. na dia ireo mpakafy kanto be pitsiny indrindra aza tsy afaka manampy mitsiky.
3552 Fehezam-boninkazo laharana 331
Ny vehivavy amin'ny sokajin-taona rehetra dia ho tia an'ity fehezam-boninkazo ity. Ny raozy mena dia misy ifandraisany foana, na fitsingerenan'ny andro nahaterahana, tsingerintaona, fivoriana fandraharahana, daty tantaram-pitiavana, na fiderana tsy misy antony. Ny raozy mamy indrindra dia voaravaka fehezam-boninkazo ary miaraka amina kofehy satin, izay manome ny fehezam-boninkazo endrika mahafinaritra sy maoderina. Ny karazana raozy dia mety tsy hitovy amin'ny sary amin'ny tranokala arakaraka ny vanim-potoana.
14680 Fehezam-boninkazo mena 101
Composition: Rose mena - 55 pcs. Famonosana: kasety. Saika ny vehivavy rehetra no ho tia ity fehezam-boninkazo ity. Ny raozy vaovao dia mameno amin'ny kofehy satin ho an'ny fiakanjo kanto sy maoderina. Ny karazana raozy dia mety tsy hitovy amin'ny sary amin'ny tranokala arakaraka ny vanim-potoana.
8850 Terrasà amin'ny alina
Fehezam-boninkazo mavokely mena mahazatra. Composition: Rose mena - 51 pcs. Famonosana: kasety. Saika ny vehivavy rehetra no ho tia ity fehezam-boninkazo ity. Ny raozy mena dia misy ifandraisany foana, na fitsingerenan'ny andro nahaterahana, tsingerintaona, fivoriana fandraharahana, daty tantaram-pitiavana, na fiderana tsy misy antony. Ny raozy vaovao dia mameno miaraka amina satin ribbon, manome ny fehezam-boninkazo endrika mahafinaritra sy maoderina. Ny karazana raozy dia mety tsy hitovy amin'ny sary amin'ny tranokala arakaraka ny vanim-potoana.
7770 Fehezam-boninkazo mena 51
Fotsy fotsy, mavokely - 31 pcs. Fonosana: kasety. Ny karazana raozy dia mety tsy hitovy amin'ny sary amin'ny tranokala arakaraka ny vanim-potoana.
5430 Fehezam-boninkazo raozy fotsy sy mavokely 31
Ny vehivavy amin'ny sokajin-taona rehetra dia ho tia an'ity fehezam-boninkazo ity. Ny raozy mena dia misy ifandraisany foana, na fitsingerenan'ny andro nahaterahana, tsingerintaona, fivoriana fandraharahana, daty tantaram-pitiavana, na fiderana tsy misy antony. Ny raozy vaovao dia voaravaka fehezam-boninkazo ary miaraka amina kofehy satin, izay manome ny fehezam-boninkazo fijery kanto sy maoderina. Ny karazana raozy dia mety tsy hitovy amin'ny sary amin'ny tranokala arakaraka ny vanim-potoana.
7090 Taratasy fitiavana
Fehezam-boninkazo raozy mahazatra. Composition: Rose mena - 31 pcs. Famonosana: kasety. Ny vehivavy amin'ny sokajin-taona rehetra dia ho tia an'ity fehezam-boninkazo ity. Ny raozy mena dia misy ifandraisany foana, na fitsingerenan'ny andro nahaterahana, tsingerintaona, fivoriana fandraharahana, daty tantaram-pitiavana, na fiderana tsy misy antony. Ny raozy mamy indrindra dia voaravaka fehezam-boninkazo ary miaraka amina kofehy satin, izay manome ny fehezam-boninkazo endrika mahafinaritra sy maoderina. Ny karazana raozy dia mety tsy hitovy amin'ny sary amin'ny tranokala arakaraka ny vanim-potoana.
5230 Firehetam-po Espaniola
Ny vehivavy amin'ny sokajin-taona rehetra dia ho tia an'ity fehezam-boninkazo ity. Ny raozy fotsy dia misy ifandraisany foana, na izany: fitsingerenan'ny andro nahaterahana, tsingerintaona, fivoriana fandraharahana, daty tantaram-pitiavana na fiderana tsy misy antony. Ny raozy mamy indrindra dia voaravaka fehezam-boninkazo ary miaraka amina kofehy satin, izay manome ny fehezam-boninkazo endrika mahafinaritra sy maoderina. Ny karazana raozy dia mety tsy hitovy amin'ny sary amin'ny tranokala arakaraka ny vanim-potoana.
5230 Mamatonalina feno kintana
30830 51 nitsangana Juliet
15750 Raozy 25 Juliet
30320 Raozy fotsy 51 Ohara
15500 Raozy 25 White Ohara
9800 Raozy 15 White Ohara
29300 Raozy 51 Misty Bubble
20500 Raozy 35 Misty Bubble
15000 Raozy 25 Misty Bubble
9700 Raozy 15 Misty Bubble
66900 Raozy mena 101 metatra
34400 Fehezam-boninkazo mena 51 metatra